I-Alaskan Malamute iyinja enkulu, enamandla enokufikelela kwisisindo esingama-50 kg., Ukuphakama ekugqibeni kufikelela ku-76 cm, nangona ubude obude bufikelele ngaphezu kwe-60 cm. Inja enkulu, ephakamileyo ebonakala njengengcuka iyinto enhle kwaye ingashiyi mntu.
Inja yohlobo lwe-Alaskan Malamute, ngenxa yegama layo, inyanzelekile kwisizwe se-Eskimo esibizwa ngokuthi iMalmute. Isizwe esihlala kumlambo u-Anvik e-Alaska. Ngaloo mihla, ezi zinja-iikhabhi zazisetyenziselwa ukuthutha imithwalo kwiimeko ezinzulu. Ukufumana ukunyamezela okumangalisayo, ama-malamutes abhekane nokuhamba kwexesha elide kumgama omde. Ngomnyaka we-1896, imfuno yolu luhlobo yayiyinkulu ngenxa ye "Gold Rush"
Okwangoku, amalamlam ase-Alaskan ahlukaniswe ngeentlobo ezimbini ezahlukeneyo. Uhlobo lokuqala, olubizwa ngokuba yi-mulut, yesibini-kotsebu.
Umlambo wangempela ngumbala wempisi, kumgca we-nimlut kukho eminye imibala: ingcuka, i-white-white, eluhlaza okwesibhakabhaka, emhlophe kunye nomnyama nomhlophe. I-Kotzebue yincwadana encinci yeenja, iselula ngakumbi xa ithelekiswa ne-mulute. UArthur Walden kunye nesibini isibini uMilton no-Ewa Seely baxhomekeke kwikota ye-kotzebu. KwakunguEva noMilton ababhalise i-kotzebue kwi-ACS ngo-1935. Ukuzaliswa komgca we-nimlut wenziwa nguPaul Volcker. UPawulos akazange abhalise izinja zakhe, wathengisa kuphela. Ukubhaliswa kwaqhutyelwa ngabantu abathengayo imilambo evela kuye. Ababelethi basaphikisana malunga naluphi umgca weemilawu zokuqwalasela okulungileyo, ngaphezulu "ezichanekileyo", kodwa akazange afikelele kwisiphetho esithile. Kuze kube ngoku, abamele bobabini be-nimlut ne-kotzebue abazange baphulukane nezinto zabo zokusebenza.
Amalamala e-Alaskan ngenxa yobumnandi obubonakalayo kunye nokubonakala kwento yokudlala ebizwa ngokuba yi "cubs big". Ezi "iingcuka" ezintle zihlale zikulungele ukudlala, kungekhona ngokusesikweni sokunyusa ummkeli nge-gay antics. Iimpawu ezingcono ziziva zingekho kwindawo yedwa, kodwa kwintsapho, esondele kumnini kunye nentsapho yakhe. I-Malamute ayinakuyithathwa njengenja enye inkosi. Izinja zihlakaniphile kakhulu, kodwa zinenkani. Ukuba i-malamute idinwa ngumsebenzi okanye umphathi uphinda amaxesha amaningana ngeliqela elinye, uya kubonisa ubunzima. Iimilalamla zilula ukufunda, kwaye ziyavuya ukufeza umyalelo wenkosi kanye okanye kabini, kodwa kungekudala inkqubo yokufunda ingayibamba (le propati yomlingani inemvelaphi kwiintlobo ezininzi ezisentla). Amalamala ase-Alaskan awafanelanga abaqalayo, abanikazi abanamava kuphela. Iimpazamo ezenzelwe ukukhutshwa kwebhola ziya kuba nzima kakhulu ukulungisa emva koko. Hayi, kwiimpawu zivame ukungavumi ngenxa yesi sizathu: ukuwela othandweni nentaka enhle, umnini akakwazi ukuhlangabezana nenja enenkani nenkulu kamva.
Ukuba nomlinge oqinileyo, iilalamthi zenziwe ukuba zilawulwe ezinye iinja, ngenxa yezizathu ezifanayo zokubonisa ubugwenxa kwiintsapho zabo. Umnini kufuneka adlulisele intshontsho ngokukhawuleza kwintlanga yezinye izinja, ukumisa iinzame zepilesi ukuba zichasane.
Amanqaku awubonakali ulwaphulo kubantu, ngoko asebenziswanga kwiinkonzo zokukhusela. Ukuqhawula uhlobo lwezinja ezilungileyo alusebenzi. Amanqaku amalindi ababi - abonisa ubuhlobo kumntu wonke. Nangona ngamanye amaxesha ifomu layo eliyingozi liloyiko. Kodwa musa ukulawula ukuba kungenzeka ukuba isela elinyukayo endlwini yakho, i-lilamute lick, njengomhlobo omhle wentsapho-ke yena kunye nomlambo ...
Uboya kunye nokunyamekela
Iimilamla zinesiqwenga esikhuselweyo. Kudinga ukudibanisa rhoqo ngexesha le-molting, eyenzeka kabini ngonyaka. Kwimozulu efudumalayo, amalamlo alahlekelwa ulusu oluncinane kulo nyaka. Ucocekile kakhulu, njengamakati. Baphantse bangabi nevumba, ngoko akudingeki bahlambwe kaninzi, kwanele ukuhlamba kanye okanye kabini ngonyaka. Ukutyunjwa kwamatyala akuyimfuneko. Unonophelo olufunekayo kuphela - ukunqumla kunye nokudibanisa rhoqo.
Olu luhlobo lwezinja luyizifo eziqhelekileyo ezifana ne-eczema, isisu, ukuguquka kwegazi, impumlo ibe yinto emhlophe okanye i-pinki (ngaphandle koko isifo sifana "nephunga leqhwa"). Iimilalam ziza kubangela izifo zamehlo (i-atrophy ye-retina, i-hemeralopia, enye into ebizwa ngokuthi "ubumpumputhe bemini"). Phakathi kweenja zomgca we-nimlut, udibeneyo, onokufunyanwa ngexesha elifanelekileyo ngokuhambelana nenkqubo yokuhlola ephuhlisiwe. Kukho i-dysplasia ye-joint hip.
Ukujonga ubungakanani obukhulu bomlambo, kubonakala ngathi kunzima kakhulu ukuyondla, kodwa oku kudukisa. Amalamlam adla kakhulu ngaphantsi kunabameli abaninzi beematye kunye nobukhulu obufanayo kunye nobukhulu. Amalamlo anesidlo esinamandla, kwaye angadla konke ukutya owambekayo, nangona ukuba lukhulu kakhulu kuye, oluye lubangele ukubonakala kwesitya. Isizathu sokutya esilungileyo singasetyenziselwa uqeqesho, ngaphandle kokutya, ngokuqinisekileyo. Ukulangazelela ukutya kwiimilamla kukukhulu kangangokuba banakho ukuba ukutya kwitafile yakho. Ungashiyi ukutya kwindawo efikelelekayo kwinja.
Yenza inja ibe nenxaxheba evuya ngokwenene kuyo yonke imicimbi yentsapho apho iqulethe khona. INdumiso yamaMalamute iya kuthanda ukuba neyakhe "inja" emnyango wokufikelela ngokuzimela kwisitrato ukusuka ekhaya. Ukugqwesa, ukuba kukho indawo apho inja inokufudumala khona, kodwa ucingo luyimfuneko, ephakamileyo ngokwaneleyo ukuba inja ayibaleki. Amanqaku ahambelana nokuhamba yedwa, okuqhelekileyo kuzo zonke iintlobo ezisentla. Ungavumeli inja igijime. Amanqaku afana nomnye: bathanda ukumba umhlaba. Ukususela esemncinci, umlambo kufuneka ufundiswe ukumba kwindawo enye. Kuyinto enqwenelekayo ukuba le ndawo yayikhethekileyo kuye ibhokisi yesanti. Inja yelalamute ayikwazi ukuqhelaniswa ngokupheleleyo ukuba ingayibambi. Isidingo sokwakheka sisona sikhulu semvelo yezinja zalolu hlobo. Kwixesha elidlulileyo, bazifumana bephila ngoko, beqhekeza umhlaba ukuze bafikelele emanzini. Amanqaku athande inqubo, apho bafumana ukuzonwabisa kwangempela. Kwi-site ephawulekayo, ngokukhenkcezwa ngokugqithisileyo, ungakhawuleza ukuba le nkundla igqitywe ngumlayezo.
Iimilamla zinamandla okuzingela ama-instincts. I-dog flame iya kulandela yonke into ehambayo, i-squeaks okanye i-squeals. Gcina inja ekuxoseni imouse, intaka okanye ikati kunzima kakhulu, ngoko kukubakho ukushiya inja yedwa kunye nezilwanyana ezincinci.
Iimilalam zilungile kuba zibekezela ngokuthe ngqo imozulu ebanda. Ngaphandle kweemeko ezisenyakatho azikhathaleli. Iimilalam zikhetha ukugcina kwikhenelyu efudumele kwisitalato, kunokuba kufakwe kwigumbi. Izinja ziyakuthanda ukukhuphukela eluphahleni lwekennel kwaye zihlolisise ngokuphakamileyo kwimpahla yazo.
Inkcazo yenja yohlobo lwe-pomeranian
Ikhekhe le Apple
Ukwenza ubugcisa ngo-Matshi 8 kwi-kindergarten kumama nogogo
I-Smoothies ye-avocado ne-peach